By vijayafm on	 June 22, 2018 अन्तरवार्ता, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
गैँडाकोट वाड नं. ५ लाई चर्चित बजारका रुपमा विकास गर्ने सपना संगाल्नुभएका वडा अध्यक्ष नवराज कंडेलले गैँडाकोट ५ लाई अब डिजिटल वडाका रुपमा विकास गर्ने बताउनुभएको छ । आफ्नो वडालाई उज्यालो वडा, सफा वडा, नारायणी किनारलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने कंडेलका योजना छन् । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ कस्तो रह्यो ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेकै बाटो बनाउने, भएका बाटाको स्तरोन्नति गर्ने थियो । आफ्नै वडाको बजेट र नगरको सहयोगमा अति आवश्यक बाटाहरुको स्तरोन्नति सम्पन्न भएको छ । यसअघि विजय खबरसंगको अन्तर्वार्तामा पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको बाटो पिच हो भनेको थिएँ । बजेटको आकार हेरी नगरको सहयोगमा सम्भव भएसम्म धेरै कामहरु गरेका छाँै । बाँकी कामहरुलाई आगामी वर्षको योजनामा समावेश गरिनेछ । उज्यालो वडाका रुपमा पनि केही कामहरु भए । वडा उज्यालो बनाउने भनी केही सोलार बत्तीहरु गैँडाकोट नगरपालिकामा आएका थिए, ती गुणस्तरीय नआएका कारण त्यसको बजेट समग्र गैँडाकोट नगरपालिकाको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो । जहाँ बत्ती छैन, जहाँ पोल छैन, जहाँ भोल्टेज छैन, त्यस्ता स्थानमा लगाइएयो । अहिले लोडसेडिङ नभएका कारण हाम्रो वडामा विद्युतीय लाइनबाट उज्यालो वडा बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो समीक्षा हो । यसैगरी लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रभावित क्षेत्रको खोजी गरी त्यस्ता ठाउँमा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । केही क्षेत्रमा विजय खबरकै रोहबरमा पनि काम सम्पन्न गरेका छाँै । यो यहाँहरुलाई अवगत भएकै कुरा हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा वडाबासीको समस्यामा नवराज हरदम अघि उभिएको छ । उहाँहरु पनि सन्तुष्ट भएको महसुस गरेको छु ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कस्ता योजनाले प्राथमिकता पाउने छन् ?
भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी आगामी ५ वर्षमा वडालाई सविधा सम्पन्न वडा बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यस लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी योजना छनोट गरिनेछ । यसपटक बजेटको सिलिङ करिब ६० लाखको हुने अनुमान गरेका छौँ । यही सिलिङका आधारमा विभिन्न टोलविकास संस्था, वडाबासीका माग र वडाको विकास अघि बढाउने हो । यस कारण यो वर्ष पनि वडालाई वातावरणमैत्री वडा बनाउने, उज्यालो वडा बनाउने, बालमैत्री वडा बनाउने, वडालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने, युवालाई आयआर्जनतर्फ उन्मुख गराउने, गरिब, विपन्न, दलितका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका अघिल्लो आर्थिक वर्षका योजनाहरुले निरन्तरता पाउने छन् । यसवर्ष नयाँ कार्यक्रमका रुपमा गैँडाकोट ५ लाई डिजिटल वडाका रुपमा विकास गर्ने सोच बनाएको छु । यो डिजिटल वडा भनेको वडाभित्रका विभिन्न बाटोहरुको डिजिटल नक्सांकन हुन्छ । एउटा घरदेखि अर्को घरसम्मको दूरी, एउटा चोकदेखि अर्को चोकसम्मको दूरी पार गर्न लाग्ने समय डिजिटल बोर्डले सम्पूर्ण जानकारी दिने हिसाबले हुनेछ । यो त प्रारम्भिक सोच मात्रै हो । पूर्ण डिजिटल वडा विकास गर्नका लागि विशेषज्ञ इन्जििनियरहरुसँग विशेष छलफल पछि मात्रै डिजिटल वडाको विस्तृत अवधारणा बन्नेछ ।
वडाको योजना छनोट गर्ने आधार के हो ?
वडामा योजना धेरै नै माग भएका छन् । ती सबै माग भएका योजनाको सम्बोधन गर्नु हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य पनि हो । तर बाध्यता के हो भने सबेै चाहेर मात्रै पूरा हुँदैन । हरेक चिजको सीमा हुन्छ । हामी पनि केही सीमाभित्र रहेर योजना छनोट गर्नुपर्दछ । योजना छनोट गर्दा योजनाको आवश्यकता, समुदायमा त्यसको माग किन छ ? कतिको आवश्यकता छ ? यो विषयमा पहिले निक्र्याेल गरिन्छ । बाटोघाटोका सन्दर्भमा पनि जहाँ जनघनत्व बढी छ, त्यहाँ बाटाको आवश्यकता छ भन्ने हामीले बुझेका छाँै । त्यसैले त्यस्ता स्थानमा पहिलो प्राथमिकतामा सडकको स्तरोन्नति गर्ने केही आधार सूची हुन् ।
पहिलो चरणमा भत्केका बाटाघाटा बनाउने काम गर्नेछौँ, ग्राभेल छैन भने ग्राभेल गरिने छ । जहाँ बत्ती पुगेको छैन त्यहाँ बत्ती पुर्याउने काम हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । यस्तो कुसुमनगरको रिंगरोड पनि हाम्रै कार्यकालमा पूरा गराउने सोच राखेका छौँ । यति मात्र होइन गैँडाकोट २ को चौकी पछाडीदेखि गणेश मन्दिरसम्म हुँदै विजय चोक निस्कने बाटो धेरैको रोजाइको बाटो भएको हुँदा यसलाई माथिकै बजेटबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ भन्ने हामीहरुले सोच बनाएका छौँ । नारायणी छेउको बाटोमा रिंगरोड बनाएर खाली जग्गामा होटल रिसोर्ट खोल्न सकिन्छ । टुरिजमका लागि पनि वडा नं. ५ को विकास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा नवराजले एक्लै योजना निर्माण गर्ने पनि होइन । सहभागितात्मक विकासप्रक्रिया अपनाएर हामीले योजना निर्माण गर्ने हो । सबै पक्षका मागलाई चित्त बुझाएर योजना छनोट गर्ने छौँ ।
गैँडाकोट ५ लाई नमुना वडाका रुपमा विकास गर्ने तपाईंको सोच, कार्यान्वयनको कुन तहमा पुगेको छ ?
यस वडालाई नमुना वडाका रुपमा विकास गर्न पूर्ण सरसफाइ वडा घोषणा गर्ने गरी काम गर्दैछौँ । पहिलेदेखि नै सरसफाइ अभियान जारी रहेको छ । नमुना वडाका रुपमा विकास गर्न पहिलो चरण भनेको सरसफाइमा पूर्ण सफल हुनुु पर्दछ । यसका लागि पनि योजनागत रुपमा अघि बढेका छौँ । यसमा हामीलाई के सहज छ भने हाम्रा धेरै जसो टोल विकास संस्थाहरु नगरभित्रकै वातावरणमैत्री टोल घोषित भइसकेका छन् । यस्तै नमुना वडाका रुपमा विकास गर्न गैँडाकोट ५ का अब बन्ने नयाँ घरको अगाडिको फेस एउटै मोडलको हुनुपर्ने कुरा पासजस्तै भएको छ । यसमा सबैले समर्थन गर्नुभएकै छ । पुराना बनिसकेका घरहरुको कलर पनि एउटै बनाउन सकियो भने, गैँडाकोट ५ पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा पनि विकास हुन्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण वडावासीको विचार हो । विकासको पहिलो खुड्किलो भनेको इमान्दारिता हो । यदि हामी सबै इमान्दार भएर नगरको विकासमा जुट्ने हो भने गैँडाकोट नगरको पाँच वर्षको समृद्ध अभियान सफल हुन्छ । यसमा दुई मत छैन ।